LOVE Mpivady tsy mifankaleo anaty fihibohana, ny atao...
Na dia miditra tsikelikely ao anatin'ny fialana amin'ny fihibohana aza isika dia mbola tapakandro ihany no hahafahana mivoaka.
Ahoana ny atao ahitako olona tiako sady tia ahy
Ny ho tiana sady ho tia, izay no nofinofin’ny ankamaroan’ny olona. Ahoana anefa no ahitana ilay olon-tiana io? Misy azo atao ve hanafaingana ny fahitana azy? Mety hanampy anao ireto torohevitra ireto
Nisaraka : Fomba 4 mampitony ratram-po
Mazàna dia aorian'ny fisarahana amin'ny olon-tiana no miseho. Ahoana no atao mba ho sitrana amin'izany? Ireto misy torohevitra 4 azo atao.
Torohevitra 5 hanamafisana ny fifandraisam-po eo amin'ny mpivady
Inona ny atao mba ho tsara fifandraisana foana ny mpivady? Atoronay anao 1- Miresaka fa tsy maminavina fotsiny
Mahay mifaneho fitiavana, na efa ela niarahana aza
Any am-piandohan'nyy fiarahana, dia mandeha ho azy ny fifampizaràna fitiavana, ny fifanehoana tambitamby, ny fitenenana teny mamy...
Nyatao, mba tsy hampirafy ny lehilahy…
Misy toetra, trangam-piainana, vanim-potoana… mety hanosika ny olona aoanaty tokantrano ny ho amin’ny fampirafesana.
Fomba 4 hahatonga azy tsy handao anao intsony
Mampalahelo ny mahatsiaro fa mandeha ila ihany ny fitiavana ao anatin’ny fiarahan’olon-droa. Ahoana tokoa ny hatao mba hahatonga azy vonona ny hiroso lalindalina kokoa aminao sy tsy hahafoy anao mihitsy
Mampijaly ny olona hiharan’ny hasarotam-piaro koa. Samy tsy misy mahita tombony avy aminy fa vao maika aza mikorontana ny fifankatiavana. Inona ny atao hiadiana aminy? Atoronay anao :
Fitiavana te-hifehy ny olon-tiana fa tsy fitiavana azy :
Mifantoka amin’ny antsipirian-javatra momba ny fiainan’ny olona maha-saropiaro azy ny olona diso saro-piaro. Fantany amin’ny antsipiriany avokoa ny fandaharam-potoanan’ny olon-tiany hany ka vao misy toa tsy manaraka ny lojika araky ny eritreriny ny zava-miseho dia tsy mahafaly azy indrindra izany ary heveriny avy hatrany fa mampirafy azy na miresaka amin’ny vehivavy hafa foana ny olona miaraka aminy.
Mipetraka amin’ny toerany
Hadisoan-kevitra ihany ny fiheverana fa fanehoam-pitiavana ny hasarotam-piaro. Ny olona diso saro-piaro mantsy dia mifehy tanteraka ny olona miaraka aminy toy ny zazakely. Rehefa tia mantsy dia mitsinjo ny hasambaran’ny olona tiana. Tokony hahatsapa ny olona saro-piaro fa tsy mahasambatra ny olona miaraka aminy velively fa mampijaly azy tanteraka ny hasarotam-piaro. Rehefa tena tia koa dia matoky ny olon-tiana. Na dia tsy heverina firy aza izany dia miteraka alahelo anaty ho an’ny olona iharan’izany ny ahiana ho manao ratsy lava. Raha diso saro-piaro ianao dia meteza vetivety ho eo amin’ny toeran’ilay ampiharanao izany hasarotam-piaro izany.
Mianatra matoky tena
Avy amin’ny tsy fahampian’ny fahatokisan-tena ny hasarotam-piaro. Raha maniry hiala amin’izany dia ny voalohany hatao dia ny mifantoka amin’ny tena aloha. Diniho ny tianao hatao eo amin’ny fiainana.Mametra tanjona ho tratrarina. Ataovy izay hampivelatra anao amin’ny maha-olona anao mihitsy amin’ny lafiny rehetra. Misafidiana spaoro na alavoly atao ankoatra ny fianarana na ny asa. Aza atao ivon’ny fiainanao ny olon-tianao fa ny hahatafita anao aloha hifantohana.
Mifantoka amin’ny fiarahana
Rehefa vitanao izany rehetra izany dia mifantoha amin’izay amin’ny fiainam-pitiavanao. Niniana notsindriana mihitsy ny hoe :fiainam-pitiavana satria ilay fiarahanao aminy, ilay fifankatiavanareo no tsara hifantohana fa tsy ilay olona manokana. Inona ny hahatsara ny fiarahana? ahoana no hikoloana ny fitiavana hiredareda foana? Ahoana ny atao tsy hahatonga azy ho leo anao mihitsy? Ireo ny karazam-panontaniana tsara valiana sy hitadiavam-baliny. Fa tsy ny hoe : Aiza izy izao? manao inona, miaraka amin’iza? Raha ireto farany mantsy dia tsy hitarika afa-tsy ady eo aminareo. Ny loza dia ho leo anao izy ny farany moa ianao kosa ho feno ahiahy loatra ka tsy hahatsiaro ny hasambaran’izany hoe : mitia izany intsony.